शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई कानुनी दायरमा ल्याइयोस्ः सन्तोष कुरुम्बाङ
वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहनेका लागि परामर्श दिइरहेको डट लिंक धरान पूर्वमा परिचित परामर्श केन्द्र हो । डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि धरानमा रहेर विद्यार्थीलाई विभिन्न परामर्श दिनुका साथै विभिन्न विषयमा तालीम दिइरहेको यो संस्था र वैदेशिक अध्ययनको बारेमा संस्थाका निर्देशक सन्तोष कुरुम्बाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
डट लिंक कस्तो संस्था हो ?
डट लिंक धरानको निजी शैक्षिक जगतमा नौलो नाम होइन । २०५९ सालमा स्थापना भएको यस संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा आजसम्म निरन्तर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । स्थापनाकालमा कम्प्युटरसम्बन्धी तालीम तथा भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी सेवा प्रवाह गरेको थियो भने पछिल्लो समयमा विद्यार्थीको वैदेशिक अध्ययनको चाहनालाई पूरा गर्न र विश्वभर नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि वातावरण निर्माण गर्न पुलको रूपमा काम गरिरहेको एक शैक्षिक परामर्श केन्द्र हो ।
यस संस्थाबाट के कस्ता सेवा प्रवाह भइरहेका छन् ?
नयाँ खोज, अनुसन्धान, नयाँ प्रविधिको विकासका साथै विश्वमा विभिन्न किसिमको आविष्कार भइरहेका छन् । योसँगै विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक प्रणाली र शैक्षिक गुणस्तर पनि विश्वबजारमा जोड प्रतिष्पर्धामा छ । साँच्चै भन्ने हो भने नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपालकै शैक्षिक प्रणालीअन्तर्गत रहेर यो जमानामा विश्व जगतसित प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन छ त्यसैले नेपाली विद्यार्थीहरूको रुचिअनुसार विश्वका विभिन्न देशहरूमा अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई सही शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक भाषा शिक्षणका कार्यहरू गरिरहेका छौँ । त्यससम्बन्धी अन्य विविध सेवा प्रदान गरिआएका छौँ । यतिमात्र नभएर हामी नेपालमा सरकारी जागीर खान चाहनेहरूको लागि तयारी कक्षा र बीचैमा अध्ययन छुटेकाहरूका लागि प्राइभेट कक्षाका साथै विभिन्न भाषाका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
अहिलेसम्म यो संस्थाले हासिल गरेका उपलब्धिहरू केके हुन् ?
उपलब्धिको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो संस्था १७ औँ वर्षमा प्रवेश गर्न गइरहेको छ । स्थापनाकालमा कम्प्युटरसम्बन्धी तालीम दिने संस्थाहरूमा यो संस्था पनि धरानमा चर्चित संस्थाको रूपमा चिनिन्थ्यो । निरन्तर करीब एक दशक यही क्षेत्रमा कार्य गरेको यस संस्थाले कम्प्युटरसम्बन्धी विभिन्न कोर्षहरू शिक्षण गरी हजारौँ दक्ष जनशक्ति तयार गरेको छ । हामीलाई खुशी लाग्छ हिजोका कयौ हाम्रा विद्यार्थीहरू कम्प्युटरसम्बन्धी पेशालाई अपनाई जीविका चलाइरहेका छन् ।
अब पछिल्ला दिनहरूको कुरा गर्ने हो भने हामी अहिले विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक परामर्शदाताको रूपमा काम गरिरहेका छौँ र सयौँ विद्यार्थीहरूको सपना साकार पार्नसमेत सफल भएका छौँ । यसले अझ यो संस्थाको विरासतलाई बलियो रूपमा स्थापना गर्न सहयोग पुगेको छ ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशहरूमा अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । विदेशमा गएर लिएको ज्ञान र सीप विश्व बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छ । साथै नयाँ अवसरको खोजीसँगै विश्वभरका विद्यार्थीहरूसित प्रतिष्पर्धा गर्नको लागि पनि वैदेशिक अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसका साथै नेपालको मुख्य समस्या यहाँका विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययनपछिको रोजगारीको अवसर नहुनु पनि हो । अन्य देशहरूमा अध्ययनपछि तुरुन्त रोजगारीका साथै नेपाली विद्यार्थीहरूको सवालमा अध्ययनसँगसँगै काम पनि गर्न पाइन्छ । यी कारणले पनि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
डट लिंकको आगामी योजनाहरू के के छन् ?
विश्व नै साँगुरो भइरहेको यो युगमा नेपाली विद्यार्थीहरू जुनसुकै विश्वविद्यालयमा पनि गएर अध्ययन गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ । देश सङ्घीयतामा गइसकेको यो परिस्थितिमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा अध्ययन गर्नको लागि राजधानी काठमाडांै नै जानुपर्ने अवस्था योभन्दा पहिले रहेकाले विद्यार्थी, अभिभावकहरूको सहजताको लागि देशको राजधानी नै गइरहनुपर्ने बाध्यतालाई हल गर्न र राजधानीबाहिरका विद्यार्थीहरू जो अध्ययनको लागि बाहिर जान चाहन्छन् उनीहरूको लागि सम्पूर्ण काम यतैबाट गर्ने गरी काम हुने गरी सेवा प्रदान गर्दै विश्वासिलो रूपमा काम गर्ने योजनासहित विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू निर्माण गरिरहेका छौं ।
विद्यार्थीहरूले कस्तो सुविधा पाइरहेका छन् यो संस्थाबाट ?
शैक्षिक परामर्श केन्द्रले मुख्यतः विद्यार्थीहरूको रुचिअनुसार जानकारी तथा परामर्श प्रदान गर्ने हो । यसका साथै जान चाहेको कलेज तथा विश्वविद्यालय, त्यस देशको शैक्षिक तथा अन्य नियमकानुनसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिन्छ । कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भर्नाको लागि आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र न्यूनतम योग्यताको बारेमा जानकारीका साथै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीहरूको लागि विदेश अध्ययनको लागि जानलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न देशका भाषा तथा तयारी कक्षाहरू समेत गराइरहेका छौँ ।
अहिले तपाईँहरूले कुनकुन देश जाने विद्यार्थीहरूका लागि सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?
मुख्यतः हामीले जापान र युरोपका विभिन्न देशहरू, अष्ट्रेलिया, यु.के. क्यानडा, न्युजिल्याडका साथै अन्य देशहरूको लागि पनि काम गरिरहेका छौँ ।
अहिले कुनकुन भाषा प्रशिक्षणहरू गराइरहनुभएको छ ?
धरानको सवालमा यहाँका विद्यार्थीहरूको रुचिअनुसार अध्ययनका लागि र रोजगारीका लागि भए पनि जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न भाषाका कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ । जस्तै जापानिज भाषा, कोरियन भाषा, अङ्ग्रेजी आदि भाषाहरूको प्रशिक्षण अनुभवी तथा दक्ष प्रशिक्षकबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई सरकारको नीतिगत असहयोग छ भन्ने गुनासाहरू छन् नि ?
असहयोग नै त नभनाँै । भर्खर त देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेर नयाँ संरचनामा सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसैले आवश्यक नियमकानुनहरू निर्माण हुन सकिरहेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँड हँुदा यो अन्योलको सिर्जना हुन गइरहेको छ । नेपालमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श महाशाखाले हेर्ने गरेको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घ र प्रदेशमा अधिकार बाँडफाँड हुँदा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई प्रदेश सरकारले हेर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । त्यसकारण यसको लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय प्रदेशहरूमा कानुन निर्माण भएको छैन । जसका कारण आवश्यक नियमन, निरीक्षण नहुँदा विद्यार्थीहरू ठगिन सक्ने र कर छली हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो आवश्यक कानुनको निर्माण गरी यस्ता संस्थाहरूलाई नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको चाहना चाहिँ के पाउनुभएको छ ?
पछिल्लो समयमा विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि जाने गरेका छन् । धेरै देशहरूमा अध्ययनको लागि जान पाउने भएकाले नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न प्रकारका कोर्षहरूका साथै लागतमा पनि धेरै नै रोज्न पाउने अवसरहरू छन् ।
तर पनि विद्यार्थीको रुचि र चाहनाले मात्र नहुन सक्छ । अभिभावकहरूको आयस्रोत र विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरले पनि निर्धारण गर्दछ । तर पछिल्लो केही वर्षमा नेपाली विद्यार्थीहरूको चाहना अध्ययनका साथै केही समय काम गर्न मिल्ने र आय आर्जन हुने देशहरूमा विद्यार्थीहरूको रुचि बढी देखिन्छ ।
सरकारले के ग¥यो भने चाहिँ तपाईहरूलाई सहज हुन्छ ?
सरकारले हाम्रो यो पेशालाई व्यवस्थित गर्न, विद्यार्थी अभिभावकहरू ठगिनबाट जोगाउन र कानुनी दायरामा ल्याउँदै नियमन गर्नको लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गरी व्यवस्था गरे राम्रो हुने थियो । यसबाट सरकारलाई पनि राजस्वमा केही सकारात्मक फाइदा हुन सक्छ । करीब २ वर्षयता आवश्यक कानुन नहँुदा कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरू दर्ता पनि हुन सकिरहेका छैनन् ।